Bhuku reBelmont rinotaura kuti nheyo yeBénéficence inosungirwa kuti vatsvakurudzi vagove nevatori vechikamu, uye kuti inosanganisira zvikamu zviviri: (1) musakuvadza uye (2) kuwedzera mikana inobvira uye kuderedza maitiro anokwanisa. Bhuku reBelmont rinotsvaga pfungwa ye "usakuvadza" kune tsika yeHippocratic mune tsika dzezvechiremba, uye inogona kuratidzwa nenzira yakasimba apo vatsvakurudzi "havafaniri kukuvadza munhu mumwe pasinei nezvikomborero zvingasvika kune vamwe" (Belmont Report 1979) . Zvisinei, Bhuku reBelmont rinobvumawo kuti kudzidza zvinobatsira zvinogona kusanganisira kuisa vamwe vanhu pangozi. Nokudaro, kukosha kwokusaita zvinogona kukuvadza kunopesana nekukosha kwekudzidza, kutungamirira vatsvakurudzi kuti dzimwe nguva vaite zvisarudzo zvakaoma pamusoro "apo zvinokodzera kutsvaga zvimwe zvikomborero pasinei nezvengozi dzinobatanidzwa, uye kana zvikomborero zvingafanotaurwa nekuda kwe ngozi " (Belmont Report 1979) .
Mukuita, mutemo weBaficence wakashandurwa kuti unoreva kuti vatsvakurudzi vanofanira kuita maitiro maviri akaparadzana: pangozi / kubvunzurudzwa kwebasa uye zvino chisarudzo pamusoro pekuti njodzi nezvinobatsira zvinokonzera kukodzera kwakanaka kwetsika. Iyi nzira yekutanga inonyanya kukosha nyaya inoshandisa ruzivo rwepamusoro, asi yechipiri inonyanya kukoshesa maitiro ezvakanaka apo unyanzvi huripo hungave husingakoshi, kana hunovhiringidza.
Kungozi / kubvunzurudza kunobatanidza zvose kunzwisisa uye kuvandudza njodzi uye kubatsira kwekudzidza. Kuongorora kwedambudziko kunofanira kusanganisira zvinhu zviviri: mukana wezviitiko zvakashata uye kuoma kwezviitiko izvozvo. Somugumisiro wekutengesa / kubhadhara kubatsiro, muongorori anogona kugadzirisa chigadziro chekudzidza kuti kuderedze mikana yechiitiko chakaipa (semuenzaniso, kuvhara kunze kwevatori vechikamu avo vari munjodzi) kana kuderedza kuoma kwechiitiko chakaipa kana zvichiitika (semuenzaniso, kuita kupa mazano kune vatsva vanozvikumbira). Uyezve, panguva yehutsva / kubhadhara kutsvakurudza vatsvakurudzo vanofanira kuchengeta mupfungwa yekubata kwebasa ravo kwete kungova vatori vechikamu, asiwo kune vasiri pamwe chete nehutano hwevanhu. Semuenzaniso, funga kuedza kwakaitwa Restivo uye van de Rijt (2012) pamigumisiro yezvikwereti pava Wikipedia vaparidzi (vanokurukurwa muchitsauko 4). Muchiitiko ichi, vatsvakurudzi vakapa mibairo kune nhamba shomanana yevashandi avo vaifunga kuti vakafanirwa uye vakazotevera mitsva yavo ku Wikipedia yakaenzaniswa neboka rinodzora revakakodzera vakakodzera vaparidzi kune avo vatsvakurudzi vasina kupa mubairo. Fungidzira, kana, panzvimbo yekupa nhamba shomanana yezvipo, Restivo uye van de Rijt vakafashura Wikipedia nevakawanda, mibairo yakawanda. Kunyangwe urongwa uhwu husingaiti kuti hukuvadze mumwe munhu aripo, unogona kukanganisa zvose zvikwereti zvezvinhu zviri mu Wikipedia. Mune mamwe mazwi, kana uchiita dambudziko / kubatsirwa, iwe unofanira kufungisisa nezvemigumisiro yebasa rako kwete chete kune vatori vechikamu asi pasi pose.
Zvadaro, kana njodzi dzave dzichideredzwa uye zvikomborero zvichisimbiswa, vatsvakurudzi vanofanira kuongorora kana chidzidzo chacho chichikwira zvakanaka. Maitiro ekutendesa haakurudziri kushamiswa kwemajeri uye zvinobatsira. Kunyanya, dzimwe njodzi dzinoita kuti tsvakurudzo isabvumirwe pasinei nemigumisiro (semuenzaniso, Chidzidzo cheTuskegee Syphilis chinorondedzerwa mubhuku rezvakaitika kare). Kusiyana nehutano / kubvunzurudza, iyo inonyanya kukosha, chiito ichi chechipiri ndechekudzika kwehutsika uye inogona kunge ichigadziriswa nevanhu vasina ruzivo rwakananga-ruzivo rwepamusoro. Zvechokwadi, nokuti kunze kune dzimwe nguva vanocherechedza zvinhu zvakasiyana kubva kune vasiri, maRBs muUnited States anodikanwa kusanganisira pamwe chete mumwe musingasviki. Mukuziva kwangu kushumira pane IRB, avo vari kunze vanogona kubatsira mukudzivirira boka-funga. Saka kana iwe uine dambudziko kusarudza kana chirongwa chako chekutsvakurudza chinokonzera njodzi yakakodzera / kubatsirwa hako kungokumbira vamwe vako, edza kukumbira vamwe vasiri vatsva; mhinduro dzavo dzingakushamisa iwe.
Kushandisa purogiramu yeZvibatsiro kumitatu mitatu yatinenge tichifunga inofananidzira zvimwe zvingashandurwa zvinogona kuvandudza dambudziko ravo / kubhadhara. Semuenzaniso, muEpress Contagion, vatsvakurudzi vangave vakaedza kuongorora vanhu vane makore pasi pemakore gumi nemasere uye vanhu vangave vakakanganisa kuita zvakanyanya kurapwa. Vangadai vakaedzawo kuderedza nhamba yevatori vechikamu kuburikidza vachishandisa maitiro anobudirira emaitiro (sekutsanangurwa zvakadzama muchitsauko 4). Uyezve, vangave vakaedza kuongorora vatori vechikamu uye vakapa rubatsiro kuna ani zvake akaonekwa akakuvadzwa. MuTsika, Misungo, uye Nguva, vatsvakurudzi vangave vakachengetedza zvimwe zvidziviriro munzvimbo iyo pavakabudisa iyo data (kunyange zvazvo nzira dzavo dzakagamuchirwa neHIV yeHarvard, iyo inoratidza kuti dzakanga dzakagadzikana nemafambiro anowanzo panguva iyoyo); Ini ndichapa mamwe mazano chaiwo pamusoro pekubudiswa kwemashoko gare gare apo ndinotsanangura njodzi yekuziva (chikamu 6.6.2). Pakupedzisira, muna Encore, vatsvakurudzi vangave vakaedza kuderedza nhamba yezvikumbiro zvinokuvadza zvakasikwa kuitira kuti zvizadzise zvinangwa zvepurojekiti, uye vangadai vakaisa vatori vechikamu avo vari mungozi kubva kuhurumende dzinoparadza. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi zvinogona kuitika zvinotanga kuisa mararamiro mune zvekugadzirwa kwemapurogiramu aya, uye chinangwa changu hachisi kuratidza kuti vatsvakurudzi ava vanofanira kunge vakaita shanduko idzi. Pane kudaro, kuratidza rudzi rwekushandurwa iyo nheyo yeBunficence inogona kuratidza.
Pakupedzisira, kunyange zvazvo makore edijitari akawanzoita kuenzana kwezvipingamupinyi uye zvibatsiro zvakanyanya kuoma, zvakanyatsoita kuti zvive nyore kune vanotsvakurudza kuwedzera zvibereko zvebasa ravo. Kunyanya, zvishandiso zvezera re digita zvinonyanya kufambisa tsvakurudzo yakazaruka uye inogadziriswa, apo vatsvakurudzi vanoita tsvakurudzo dzavo dzekutsvakurudza uye nheyo inowanikwa kune vamwe vatsvakurudzi uye vanoita mapepa avo avepo kuburikidza nekusununguka kunyoresa kudhinda. Iko kushanduka kuzarura nekutsvakurudza, asi zvisingarevi nyore, kunopa nzira yevanotsvakurudza kuwedzera zvibatsiro zvekutsvakurudza kwavo pasina kuisa vatori vechikamu kune imwe yengozi yakawedzerwa (kugoverana kwemashoko ndeyezvimwe izvo zvichakurukurwa zvakadzama muchikamu 6.6.2 pane njodzi yekuziva).